🥇 ▷ Huawei P30 Pro vs Mudane 20 Pro, maxaa moobiil ah oo la iibsadaa? ✅
Huawei P30 Pro vs Mudane 20 Pro, maxaa moobiil ah oo la iibsadaa?
Way sii adkaaneysaa inay kala doorato noocyada cajiibka ah ee gantaallada Shiinaha laga soo saaro. Intaa waxa u dheer, astaan-hoosaadkeeda Honor wuxuu soo bandhigayaa moodallo tartan sii kordhaya, sida Honor 20 Pro. Laakiin maamuuska cusub ee Titan ma awoodi karaa inuu u istaago calanka cusub ee Huawei? Si tan loo sameeyo, waxaan kuu soo qaadanaynaa dhammaystiran isbarbar dhigga u dhexeeya Huawei P30 Pro iyo Mudane 20 Pro.
Waxaan wajahaynaa laba moodel oo runtii dhameystiran. Horeba, markii aan helnay fursad aan ku falanqeyno Huawei P30 Pro, dareenka ayaa ka sii fiicnaan kari waayey. Laakiin xafiiltanka isbarbar dhigaan wuxuu sidoo kale leeyahay astaamo iyo naqshad aad u la mid ah. Marka keebaa fiican?
Sida aan kuu sheegnay, labada Huawei P30 Pro iyo Honor 20 Pro waxay leeyihiin naqshad aad u lamid ah. Labada marinba waxaa lagu soo saaray gudaha muraayadda indhaha iyo aluminium, oo bixiya runti qaali ah iyo muuqaal soo jiidasho leh. Haa, taleefanka Huawei ayaa xoogaa culus, laakiin farqiga lama arki karo.
Haa, the Sharafta 20 Pro shaashadda sharad on dalool shaashadda ah, element kala duwan. Dabcan, Huawei P30 Pro waxay leedahay boodh iyo iska caabin biyaha ah taas oo ay ugu wacan tahay shahaadadeeda IP68. Taasina waa tafaasiil weyn oo maskaxda lagu hayo. Ka sokow akhristeyaasheeda faro-gelinta ku dhagan shaashada. Haa, akhristaha jireed ee Honor 20 Pro wuu dhakhso badan yahay, laakiin taabashada mustaqbalka ee P30 Pro waa tafaasiil laga fiirsado.
Isbarbardhiga Huawei P30 Pro vs Sharafta 20 Pro: qalabka
U jeesashada astaamaha farsamada, labada moodel waxay isku halleeyaan processor, Kirin 980. Waxaan ka hadleynaa SoC oo ah mid aad u xasaasi ah, marka arrintan la joogo waa inaanan ka walwalin waxna. Marka la eego sharafta 20 Pro, moodelka ugu aasaasiga ah wuxuu bixiyaa 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo kaydinta gudaha ah. Taa bedelkeed, Huawei P30 Pro waxay bixisaa 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo kaydinta ah nooca ugu fudud. Dabcan, qaabkani wuxuu bixiyaa noocyo leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 ama 512 GB oo kayd ah.
Marka laga hadlayo is-xukun, labada moodel si fiican ayey u dhaqmaan. Haa Huawei P30 Pro batari iyo Mudane 20 Pro si fiican ayey u dhaqmaan, waxayna gaarayaan ku dhawaad ​​labo maalmood oo iskii ah haddii aadan si xad dhaaf ah u siinin. The Honor 20 Pro wuxuu leeyahay dallacaad deg deg ah oo ah 20.5W, halka Huawei P30 Pro ay bixiso madax-bannaani weyn, dallacaad degdeg ah oo 40W ah, ku-dallaca wireless-ka ah iyo sidoo kale dib u rogid la’aan ku-dallaca bilaa-waayirka ah, sidaa darteed moodada Huawei waxay ka sarreysaa walaalkeed marka loo eego wax wada qabsiga.
Ku saabsan shaashadda, the Sharafta 20 Pro waxay bixisaa shaashad 6.2-inji ah, Tikniyoolajiyadda IPS iyo Full HD + xalka. Arinta Huawei P30 Pro waxaan leenahay 6.47 inji, tikniyoolajiyadda OLED iyo Full HD +. Oo halkan waa inaan dhahnaa taas, shaashadda Huawei ayaa bixisa natiijooyin aad u wanaagsan. Waxay bixisaa macluumaad dheeraad ah, heer ka wanaagsan oo ifaya iyo, guud ahaan, heer ka sareeya midka ay la tartamayaan.
Iyo qaybta sawirka? Halkan waxaan ku leenahay kala duwanaansho aad u caan ah. In kasta oo ay run tahay in labada moodel ay bixiyaan qaabeyn aad u lamid ah, Huawei P30 Pro camera Nadiba qofka kaa soo horjeed. Maya, Camera 20 Pro camera ayaa bixiya sawirro tayo sare leh.
Gaar ahaan qaybta maalinta, halkaas oo labada moodelba ay ku gaaraan natiijooyin aad u lamid ah. Laakiin qaab Habeenki ah, Huawei P30 Pro waxay bixisaa natiijooyin ka sarreeya. Isku mid ayaa loogu talagalay qaab sawir iyo qaab xagal ballaadhan, halkaas oo ay mar labaad ku muujineyso tayo wanaagsan.
Iyada oo la tixgalinayo kala duwanaanshaha qiimaha, oo hadda ah 100 euro oo keliya, haddii aadan jecleyn qaabeynta sharafta 20 Pro, waxaan kugula talineynaa inaad sharad ka bixiso Huawei P30 Pro, hubanti garaacis.
EUR 695.00 EUR